तर्कात्मक पाठ कसरी बनाउने? | गठन र अध्ययन
तर्कात्मक पाठ कसरी बनाउने?
माइट निक्यूसा | 23/11/2021 23:51 | अद्यावधिक गरियो 24/11/2021 15:58 | सुझावहरू
तर्कात्मक पाठ कसरी बनाउने? लिखित रूपमा विकसित विषयको अर्थको वरिपरि गहिरो बनाउनको लागि पढ्ने समझ आवश्यक छ। त्यहाँ विभिन्न प्रकारका पाठहरू छन्। तर्कात्मक ढाँचाका विशेषताहरू के हुन्? तपाईं अवधारणाबाट अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, यो एक सान्दर्भिक विषय वरिपरि घुम्ने पाठ हो। र सामग्रीले मुख्य र माध्यमिक विचारहरूको लिङ्क देखाउँछ जसले विचारलाई बलियो बनाउँछ।
यो एक सूचना माध्यम हो जसले पाठकको लागि मूल्य प्रस्ताव गठन गर्दछ। लेखको परामर्श मार्फत, तपाईंले काम प्रकाशित गर्ने लेखकको परिप्रेक्ष्यमा आफ्नो दृष्टिकोणलाई फराकिलो बनाउन सक्नुहुन्छ। मुख्य राय डेटामा आधारित छ जसले केन्द्रीय थीसिसको दृढतालाई समर्थन गर्दछ.
एउटा थीसिस जुन पाठकलाई पूर्ण रूपमा स्पष्ट हुन्छ जब उसले विभिन्न पुन: पठनहरू गरेको हुन्छ। वास्तवमा, तर्क पाठको केन्द्रीय भागमा विकसित गरिएको छ र निष्कर्षमा पूर्ण रूपमा संश्लेषित गरिएको छ। पाठको अन्त्यमा, अहिलेसम्म भनिएको कुराको संश्लेषण गरिन्छ। विचारहरूको गणनाको विकासको माध्यमबाट, लेखक र पाठकको बीचमा संवाद स्थापित हुन्छ। वास्तबमा, लेखकले सिधै वार्ताकारलाई अपील गर्दछ। यी विशेषताहरूको पाठले प्रतिबिम्ब निम्तो दिन्छ। र यो हुन सक्छ कि त्यो स्रोतसँग परामर्श लिने व्यक्तिले कुनै विशेष मुद्दामा आफ्नो विचार परिवर्तन गर्दछ। कसरी गर्ने तर्कपूर्ण पाठ?
1 1. परिचय र सन्दर्भ
2 2. विषय छनोट
3 3. प्राधिकरणबाट तर्क प्रयोग गर्नुहोस्
4 4. एक रोचक निष्कर्ष
5 5. राम्रो शीर्षक छनोट गर्दै
1. परिचय र सन्दर्भ
परिचय यसको संक्षिप्तताको लागि बाहिर खडा छ। यद्यपि, पाठ सुरु गर्ने लाइनहरूमा विशेष ध्यान दिन सल्लाह दिइन्छ। यो त्यहाँ छ जहाँ केन्द्रीय विषयवस्तुको सार पाइन्छ। तसर्थ, परिचय बुझ्दा सम्पूर्ण लेख बुझ्न सजिलो हुन्छ। लेखकले चासोको विषय प्रस्तुत गरेका छन्। त्यसकारण, यदि तपाइँ यी विशेषताहरूसँग पाठ सिर्जना गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाइँ अन्य उदाहरणहरूबाट प्रेरणा लिन सक्नुहुन्छ।
2. विषय छनोट
त्यहाँ धेरै विषयहरू छन् जुन विश्लेषणको विषय बन्न सक्छ। तर, ती विषयहरू जुन वर्तमान अवधिसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छन्, पाठकको रुचिसँग जोडिन्छन्। यसरी, विषयवस्तु राख्न र सन्दर्भमा राख्न पनि यो सुविधाजनक छ लक्षित दर्शकहरूसँग जडान गर्न। यस तरिकाले, तिनीहरूको ध्यान जगाउन सम्भव छ।
3. प्राधिकरणबाट तर्क प्रयोग गर्नुहोस्
पाठको केन्द्रीय थेसिसको वरिपरि गहिरो गर्न, यो मामिलामा विशेषज्ञ आवाजहरूको योगदानमा गणना गर्न पनि सम्भव छ। यस तरिकाले, तपाइँ विज्ञहरूको योगदानलाई सन्दर्भ गर्न सक्नुहुन्छ जसले आफ्नो ज्ञानलाई प्रकाशनहरू मार्फत समाजसँग साझा गर्दछ जुन सन्दर्भ गर्न सम्भव छ। एक प्रतिष्ठित पेशेवरले आत्मविश्वासलाई प्रेरित गर्दछ र धेरै मानिसहरूको प्रशंसा जगाउँछ। तसर्थ, तपाईंको राय बहुमूल्य डाटामा आधारित छ। महत्त्वपूर्ण उद्धरण र सन्दर्भहरू समावेश गर्ने तर्कपूर्ण पाठको पाठकसम्म पुग्ने मूल्यवान डेटा।
4. एक रोचक निष्कर्ष
एक तर्कपूर्ण पाठले वार्ताकारको प्रतिबिम्बलाई सीधा अपील गर्दछ। तसर्थ, यो पनि खुला प्रश्न संग लेखन समाप्त गर्न सम्भव छ। एउटा प्रश्न जसले तपाईंलाई प्रकाशनमा उल्लेख गरिएका कुराहरूमा निरन्तरता दिन निम्तो दिन्छ।
5. राम्रो शीर्षक छनोट गर्दै
पाठका सबै भागहरू महत्त्वपूर्ण छन्, किनकि तिनीहरू पूर्ण रूपमा एकअर्कासँग जोडिएका छन्। एक राम्रो शीर्षक, वास्तवमा, पाठकको चासो जगाउन निर्णायक हुन सक्छ.
के भनिएको छ त्यसको ख्याल राख्नु मात्र सुविधाजनक छैन, तर पाठलाई इच्छित ढाँचा दिन पनि। उदाहरणका लागि, तपाइँ छोटो अनुच्छेदहरूमा सामग्री संरचना गर्न सक्नुहुन्छ। सफा प्रस्तुतिले अर्डरको भावना व्यक्त गर्दछ। सकारात्मक पहिलो प्रभावले कामको सामग्रीमा उत्प्रेरित गर्नेहरूको प्रेरणा बढाउँछ। तर्कात्मक पाठ कसरी बनाउने? आलोचनात्मक भावना, रचनात्मकता, विवरण र प्रतिबिम्बमा ध्यान। माध्यमिक विचारहरूले मुख्य थीसिसलाई बलियो बनाउनु पर्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: गठन र अध्ययन » हाम्रो बारेमा » सुझावहरू » तर्कात्मक पाठ कसरी बनाउने?